KENYA: Gabdho soomaali ah oo lagu afduubtay Nairobi iyo mid ka mid ah oo lacag madax-furasho laga rabo – Calanka.com
KENYA: Gabdho soomaali ah oo lagu afduubtay Nairobi iyo mid ka mid ah oo lacag madax-furasho laga rabo
Magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa la hadal hayay afduubka saddex gabdhood oo soomaali ah kuwaas oo mid ka mid ah laga soo duubay muuqal madaxfurasho looga doonayo.
Gabadha muuqaalka laga soo duubay oo lagu magacaabo Hafsa Maxamed Luqman ayaa u muuqata mid jir-dilan, oo dhiig iyo barar uga yaalo wajiga.
Xildhibaanka degmada kamukunji – oo Islii ay ka tirsan tahay – Yusuf Xasan ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qoray in ay ka walaacsan yihiin sare u kaca “afduubka” iyo rabshadaha kale ee degmada.
Hadalkiisan wuxuu imanayaa iyadoo weli la raadinayo laba gabdhood oo la waayay 15-kii bishan June.
Xildhibaan Yusuf wuxuu yiri: “Waxaan la xiriiray Taliyaha Booliska oo aan u sheegay in tallaabo degdeg ah oo muuqata la qaado, si loo difaaco rayidka, loona sugo amniga iyo badqabka dadka, lana soo celiyo sharciga iyo kala dambeynta xaafadda”.
Sidoo kale, warbaahinta Kenya qaarkood waxay sheegeen in muuqaal ay duubtay kaamerada amniga, ay ka muuqdaan gabdhaha oo xilli galab ah sii galayay dukaanka Xafsa oo Kabaha lagu iibiyo, kuna yaalla xaafadda Islii.
Ka dib waxay isu raaceen xaafadda Kayole oo ah meeshii ugu wardambeysay, sida uu qoray The Standard.
Warbaahinta qaar waxay daabeceen in mid ka mid ah gabdhahaas ay Kayole ku lahayd meel lagu iibiyo khudaarta sida Qaraha.
Muuqaalka la baahiyay oo 35-ilbiriqsi ah waxaa ka muuqatay gabadha oo indhaha ay u xiran yihiin, wejigeedana uu ka muuqday jir-dilay, waxay ku tiri: “Waa la i afduubtay, lacagna way rabaan. Fadlan soo dira”.
Xildhibaan Yusuf Xasan, ayaa sheegay in loo baahan yahay in booliska ay qaadaan ficil degdeg ah oo “lagu ilaalinayo bulshada bartilmaameedka ah iyo xaafaddooda”.
Dhowr afduub oo loo geystay gabdho ayaa la soo werinayay illaa isbuucii la soo dhaafay.
Soomaalida ku nool magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa ka carooday dil halkaa loogu geystay gabar 19 sano jir ahayd oo la la’aa muddo sadex maalmod ah.